प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता नगर्ने – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता नगर्ने
प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता नगर्ने
पुलेसो १७ पुस, २०७८, शनिबार १३:११
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदिप गिरीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने मनस्थितिमा नरहेको दाबी गरेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९४ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता गिरीले एमाले माओवादीको एकता भएपनि प्रचण्डले एकता तोड्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनले प्रचण्डमा चमत्कारिक शेली रहेको भन्दै प्रचण्डको प्रशंसार समेत गरेका थिए । ‘प्रचण्डजीको जुन चमत्कारिक शैली छ, त्यसमा अब दुईवटा कुरामात्र बाँकी छ’, नेता गिरीले भने, ‘अहिले नै उहाँ एमालेसँग एकीकरणमा जानुहुन्न अथवा एकीकरणमा गए त्यहीँका मान्छे लिएर ४० प्रतिशत बनाएर पार्टी तोड्नुहुन्छ।’ माओवादी–एमाले एक रहन नसक्ने दाबी गर्दै नेता गिरीले एकताबाट नभाग्न समेत आग्रह गरे ।
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता गोपाल किरातीले माओवाद र पहिचानलाई कुल्चेर एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन लागेको भन्दै अाफूहरु नजाने बताएका छन् । नेता किरातीले नेकपा एमाले माओवाद र पहिचान विरोधी पार्टी भएको बताउँदै एमालेमा माकेको विलय हुने दाबी गरे ।
”यो एकता भन्ने लोकप्रिय शब्द उहाँहरुले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ । हामी त्यसलाई बिलय भनिरहेका छौं, पार्टी भनेको के हो ? पार्टी केले बन्छ ? यसका आधार हुन्छन् । वर्ग दृष्टिकोण, विचारधारा, रणनीति, कार्यनीति, राजनीतिक कार्यदिशालगायतका थुप्रै विषय वस्तुले पार्टी बनेको हुन्छ” नेता किरातीले भने । उनले नेकपा एमालेले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद एमालेले नमान्ने भएकोले एकता नभएर माकेको विलय भएको दाबी गरे ।
”माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म उठाएको आएको अर्को मुद्दा हो, पहिचानको । यो पनि एमालेले मान्दैन, त्यो छोडेर नै एकता हुन्छ । केको आधार र केका निम्ति एकता भनेर हामी प्रश्न गरिरहेका छौं ।माओवादीको नेतृत्व जो दाम्लो चुँडाएर एमालेतिर हाम्फाल्दैछ, उहाँहरुसँग यसको जवाफ छैन, हामी त्यो जवाफ खोजिराखेका छौं” किरातीको भनाई छ । उनले एमालेले माओवाद र पहिचानको मुद्दा मान्यो भने हामी नाँचेर त्यो एकतामा जाने नत्र नजाने प्रष्ट पारे ।
अाफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले माओले नगर भनेका तीनै कुरा गरिरहेको अारोप लगाउँदै किरातीले अगाडि भने,”माओत्सतुङले मार्क्सवाद लागू गर, संशोधनवाद होइन, खुला र स्पष्ट हौ, छलछाम र षड्यन्त्र नगर, जुट र नफुट भन्‍नु भएको छ तर अध्यक्ष कमरेडले एमालेसँगको यो एकतामा ठीक उल्टो गरिरहनु भएको छ ।”
उनले प्रचण्‍डले मार्क्सवादमा मौनता, असोज १६ गते षड्न्त्र गरेको र के आधारमा जुट्ने ? भन्नेमा अन्यौलता देखाएको बताए । नेता किरातीले माओवादी अान्दोलनमा जसले माओवाद र पहिचानको मुद्दा छोड्‍छ त्यो पार्टी फुटाउने समूह भएको बताउँदै अहिले प्रचण्ड पार्टी फुटाएर एमालेमा विलय गराउन लागेको बताए । अाफ्नो पार्टी र एमालेको चुनावी गठबन्धनसम्म कुनै अापत्ति नभएको बताउँदै नेता किरातीले तर माओवाद र पहिचान छोडेर एमालेमा विलय हुन लागेकोप्रति अापत्ति भएको बताए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भन्दै अाएको समाजवाद भ्रम भएको बताउँदै नेता किरातीले भने, ”समाजवाद भनेको के हो ? काँग्रेसले पनि भन्छ, एमाओवादीको नौं महाधिवेशनले भन्यो, उपेन्द्र यादवले पनि भन्छ, नारायणमान विजुक्छेले पनि भन्नुहुन्छ, तर वाम गठबन्धनले भनेको समाजवाद के हो ? त्यही नै प्रष्ट छैन ।
त्यसकारण जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ । कम्युनिष्टहरुले चाहने वैज्ञानिक समाजवाद हो ।” उनले एमाले र माकेका नेताहरुले वैज्ञानिक समाजवादलाई बद्नाम गर्न खोजेको बताए ।किरातीले वाम गठबन्धनले समाजवाद ल्याउँछौ भनेको पत्याउन नसकिने कुरा भएको बताउँदे भने, ”वाम गठबन्धनका प्रमुख खड्ग ओलीलाई माओवादी केन्द्रको प्रश्न हुन्छ, के निजी अस्पताल, बैंक र विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौं ? श्रमिकवर्गका लागि राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सक्छौं ?
आउँदो बजेटमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय साम्रराज्यवादीहरुको चँगुलबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सक्छौं ? यी ज्वलन्त प्रश्नको सकरात्मक जवाफ नदिइकन समाजवाद हुँदैन ।” नेता किरातीले माओवादी अान्दोलनको लागि हजारौंको रगत,लाखौँको पसिना र आँशु बगेको बताउँदै जनयुद्धले स्थापित गरेका मुद्दालाई छोडेर एमालेमा प्रवेश नगर्ने बताए ।
उनले अाफूहरुले महाधिवेशनको माग गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्षले महाधिवेशनको अायोजना नगरे माओवादी केन्द्रलाई पुर्नगठन गर्ने बताए । इमान्दार मिडियाबाट